QM & Mareykanka oo soo dhoweeyey doorashadii Madaxweynaha cusub ee JFS - Horseed Media
posted Khadar Ifiye
Qaramada Midoobay ayaa soo dhoweysay doorashadii ka dhacday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho halkaas oo lagu doortay Madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa hambalyo u diray Madaxweynaha la doortay, isaga oo ku bogaadiyey madaxweynaha xilka ka degaya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu si degdeg ah u aqbalay natiijada doorashada.
Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa rajo ka muujiyay in Madaxweynaha cusub uu si deg deg ah ugu dhaqaaqi doono soo dhisidda Gole Wasiiro oo loo wada dhan yahay, isla markaana ay Dowladda cusub ee uu soo dhiso iyo Dowladaha xubnaha ka ah Federaalku ay si dhow uga wada shaqeyn doonaan sidii loo horumarin lahaa arrimaha muhiimka ah ee Qaranka iyo caqabadaha horyaala.
Dhanka kale, Dowladda Maraykanka ayaa soo dhaweysay doorashadii uu kusoo baxay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana wasaaradda arrimaha dibada Maraykanku ay sheegtay inay rajeyneyso in ay si dhow ula shaqeyn doonto madaxweynaha iyo dowladda uu dhisi doono.
“Soomaaliya waxay hadda haysataa fursad ay diiradda ku saari karto dib u habeynta siyaasadda, dhaqaalaha, iyo amniga ee lagama maarmaanka u ah horumarinta danaha dadka Soomaaliyeed” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibada Maraykanka.
Sidoo kale waxaa intaas la sii raaciyey “Waxaan ku dhiirigelinaynaa Madaxweyne Xasan Sheekh iyo dhammaan madaxda Soomaaliya inay mudnaanta siiyaan xoojinta dowladnimada iyo hay’adaha dimuqraadiga ah; horumarinta ciidamada ammaanka si ay uga hortagaan ugana hortagaan argagixisanimada iyo inay si buuxda mas’uuliyad amni ugala wareegaan howlgalka Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya; samaynta dib-u-habayn dhaqaale si loo dhamaystiro waddada Soomaaliya ee deyn cafinta iyo xoojinta dhaqaalaha; iyo fududaynta gaarsiinta gargaarka bini’aadantinimo ee malaayiinta Soomaalida ah ee la ildaran abaarta ba’an.
Dib-u-heshiisiinta, isu-tanaasulka, iyo wada-hadallada la xoojiyey ee ka dhexeeya dhammaan heerarka dawladda iyo dhammaan bulshooyinka ayaa muhiim u ah guusha dadaalladaas”
Ra’iisul Wasaare Xamse oo safiirka Midowga Yurub kala hadlay xoojinta mashaariicda horumarineed
Ergayga arimaha abaraaha oo booqday kaamamka barakacayaasha ee Baardheere
Madaxweyne Deni oo Lagu Eedeeyey In uu Garan Waayey Awooddiisa Diidmada Qayaxan VETO!
Madaxweynaha Punland oo mar kale dib u magacaabey Isla Golihii Maxkamadda sare ee kalsoonida waayey
Golaha Wakiillada Puntland oo diidey in ay ansixiyaan Golaha Maxkamadda-sare
Ciidamada DFS oo howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka billaabay G. Hiiraan